नेकपाको बाटो– जग्गापथ वा पप्पुवाद ! - Ujyaalo TImes - Same Vision, Different Angles
नेकपाको बाटो– जग्गापथ वा पप्पुवाद !
२०७६ असार १० गते मङ्गलवार
पछिल्लो चरणमा सरकारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा बैचारिक बहस सुरु भएको देखियो । हुनत कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा बैचारिक, शैद्धान्तिक पक्ष पढि र ब्याबहारीक पक्ष शून्य हुन्छ । खासगरी पूर्बमाओबादी र एमालेहरुको बारेमा नेपाली जनमानसमा राम्रो ज्ञान छ । यी दुबै पार्टी राजनीतिक स्वार्थका लागि मात्रै बिभिन्न नारा र बिचारहरु अघि सार्छन् । तर कार्यन्बयन शून्य ।
बिचारमा सबैभन्दा अग्रस्थानमा मोहनबिक्रम सिंह छन् । उनले गरेको क्रान्तिको छलाङ ०७४ सालको निर्वाचनमा प्युठानबाट श्रीमती सांसद बनाएर प्रस्टै पारे । अब भने यस्ता वाइयात सिद्धान्त, बिचार र कम्युनिष्टकै बहस नगरौ । हाम्रो समाजले सात कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीको पुरा कार्यकाल देखिसके । अब यो भन्दा नदेख्ने भन्दै भर्खरै अस्ति माईतीघर मण्डलामा समेत संकेत सुरु भयो ।
जनवादी क्रान्ति गर्नेहरुका पनि तमासा देखिए । नेकपामा अहिले पाकिरहेको जबज र जज खिचडीमा कुनै नयाँपना र देशकै मुहार फेरिने दृष्टिकोण आउदैन । अब यस्ता बहस छाडेर ः जग्गापथ वा पप्पुवादमा लिप्त हुन जरुरी देखिन्छ । बर्तमान गतिबिधिले उनको यात्रा यस्तै देखाउछ ।